August | 2019 | bishnunmdc
Posted on August 27, 2019 by bishnunmdc
धन्यवाद ! वैजयन्ती विधाकेन्द्रित साहित्यिक पत्रिका ६२, कथा अङ्क–५, २०७६ असार–साउन
हुईहुई साइरन बजाउँदै महाराजगन्ज शिक्षण र तिलगंगा आँखा अस्पतालका दुईटा एम्बुलेन्स एकैचोटी जहरसिंहपौवा माथिको डाडोमा पुगे–दोर्जी रोकायाको आँगनमा । आँगनमा दुईटा एम्बुलेन्स आएको देखेपछि गाँउले छिमेकी घरबाट आँगनको डिलमा उभिएर खासखुस गर्न थाले ।
‘बुढाले छोडेछन कि क्या हो, साइँला ! पासाङले आफ्नो घरसँगै जोडिएको अर्काे छिमेकीलाई सोधे ।’
‘काका, म पुगेर आउछा, है ता ।’ बोली सक्दा नसक्दै बारीका तीन काल्ला झर्दै साइँला भन्ज्याङतिर झरे । भन्ज्याङ झरेर फेरि उकालो चढेपछि दोर्जीको घरमा पुगिन्छ । उनको घर सबैभन्दा अग्लो थाप्लोमा रहेको छ, त्यहाँबाट पश्चिममा अन्नपूर्ण, उत्तरमा दोर्जी ल्हाक्पा, लाङटाङ र पूर्वतिर गौरीशंकर हिमालको लामो लहरो, तरेली परेका पहाड र पाँचखाल, मेलम्ची, अनि काठमाडौँ उपत्यका छर्लङ्ग देखिन्छन् । प्रकृतिको धरहरा हो, त्यो डाँडो ।
साँखु, जोरपाटी र बौद्ध शहरमा जस्तो त्यहाँ गुजमुज्ज घर छैनन् । फोहोर र लथालिङ्ग पनि छैन । धेरै भनेको दुई घर एक ठाँउमा टाँसिएका छन् । नत्र भने दुई–चार कान्ला तल–माथि छिरलिएका छन् । फोन नहुँदा बारीको डिलमा उभिएर घोक हालेझँै मेलापात, बजार, मलाम, अस्पताल जान चिच्याएर बोलाउने गर्थे छिमेकीले । दोर्जी रोकायालाई ‘रोका बा’ भनेर बोलाउँछन् गाउँलेले । डोल्पाको छार्काबाट जुनबेनला, साङ्ता हुँदै कागबेनीतिर तीस वर्षसम्म भेडा लिएर ओहोर–दोहोर गरेका दोर्जीले छार्काको माटोको टिका नलगाएको २५ वर्ष भएको थियो । नेपाल छिर्दा ऊ मात्र ४४ वर्षको ठिटो थियो ।
दशैँको बेला छार्काबाट अग्ला–अग्ला लेक नाघेर झरेपछि माथिल्लो मुस्ताङको साङ्तामा चार–पाँच दिन भेडालाई लेकतिर छोड्थे । साङ्ता दुईसय वर्ष पहिले मात्र भेटिएको मुस्ताङको गाउँ हो । कागबेनीदेखि त्यहाँ पुग्न दुई दिन लाग्छ । साङ्ताको लेकमा बुकी फूल टिप्दै भेडाबाख्राले मात्र एकअर्कामा प्रेम गरेनन् । फापरको ढिडो, आलुको रोटी, छ्याङ्, रक्सी, नुन चिया खाँदाखाँदै आफूभन्दा दश वर्ष कान्छी साङ्ताकी पेमा गुरुङसँग दोर्जीको मायाप्रेम बस्यो । पेमालाई उनले जीवनसाथी बनाए ।
दोर्जी डोल्पादेखि भेडा खेद्दै पोखरासम्म पुग्थे । कुनै–कुनै वर्ष घर फर्कँदा नेपालगञ्जसम्म बसमा जान्थे । डोल्पा जुफाल उड्ने जहाज कुर्दाकुर्दै दश÷बाह्र दिन बित्दथ्यो । होटलको खाना र बास बसेको खर्च तीर्दा भेडा बेचेको पैसा त्यतै सकिन्थ्यो । कहिलेकाहीँ भने परिवारलाई एकदुई जोर न्यानो लुगाफाटो किन्न भ्याउँथे । घर पुग्दा हिउँ पर्नेबेला भइसक्थ्यो । हिमाल र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा बस्ने हाम्रा दाजुभाइ वर्षदिनमा परिवारसँग एक महिना पनि सँगै बस्न भ्याउँदैनन् । उनीहरूरूको जीवन दुई सय वर्ष पहिलेका मङ्गोलियाका फिरन्तेको जस्तै छ ।
दुवै बुढाबुढीले बेनी, बाग्लुङ, कुश्मा र पोखरा बजार देखिसकेका थिए । पेमाले दुई छोरा र दुई छोरी पाइन् । पछिल्लो पटक सुत्केरी हुँदा आफू बाँचिन् तर कान्छी बाँचिन । जति धेरै सन्तान भए पनि माया उत्तिनै लाग्दो रहेछ । धृतराष्ट्रले सय भाइ छोराहरूरूलाई माया गर्दागर्दै धर्म र सामाजिक न्यायमा अन्धा भएका थिए ‘रे । कान्छी छोरी आमाको दूधको मुन्टो नचुसी बितेकाले उनी पीरले ग्रस्त भइन् । उनका आँखाका डिलमा हिउँचुलीको टुप्पोमा हिउँ बसेझैँ बाहै्रकाल आँसु अडिएर बसे । उनलाई कर्मथलो छार्का र माइती देश साङ्ताभन्दा पनि पर सय डाँडापारि गएर बस्न मन लाग्न थाल्यो, दुई छोरा र एक छोरीलाई शिक्षा दिन ।
त्यसपटक दोर्जी पैदल नै साङ्ताबाट छार्का छिरे । ‘किन हिँडेर दुःख गरेको ? जहाजमा नआएर ? हिउँ परेको भए जुनवेन ला ले छेक्थ्यो नि ! थकित दोर्जीलाई छ्याङ तताएर दिँदै पेमाले सोधिन् । एक मग स्वाट्टै पिएपछि दोर्जीले भने ‘जहाज कुर्दा पैसा पनि सकिने, ढिलो पनि हुने त्यसैले साथीहरूरूसँग पैदलै आएँ । छिटो पनि भयो, पैसा पनि बाच्यो ।’
घर फर्केपछि दोर्जीले भेडाका पाठापाठीको स्याहार गर्दै भेडा र याक हुल्ने आँगनको पर्खाल मर्मत गर्न थाले । सुकेका गुइँठा घरभित्र राखे । दाउराका झिँजा घरको समथर छानाको छेउमा खप्ट्यार चारैतिर थुपारे । लेकमा भएका भेडा झार्ने बेला हुन थालेको थियो । घोडा द्योतराप जाने बाटोतिर थिए भने चौरी र याक माथिल्लो लेकमा चर्दै थिए । घरको धन्दा सकेर दोर्जी घर भित्र छिरे ।
“सबै बेचिदे भो । यस पटक औल झरेपछि नर्फकने भो याङ्जीको बाउ । सिधै काठमाडौँ जाऔँ । स्वयम्भुतिर बसौँला । छोरा–छोरीलाई स्कुलमा हालौँ । व्यापार गराँैला । कति जुनी भेडा खेद्ने ? भेडा, याक, चौरी, बारी सबै दाइलाई दे । दाइले जति दिन्छा, लिएर जाँउ ।’ फलामको चुलो छेउ तातोमा बसेका दोर्जीलाई नुन चिया र छ्याङ् थपिदिँदै पेमाले भनिन् । कुखुराको चल्ला माउको पखेटाभित्र छिरेर बसेझँै केटाकेटी आमाको काखमा टाँसिएर बसेका थिए ।
पेमाले बाहिर आवाज ननिस्कनेगरी एकै पटकमा सबै कुरा छिनालेर भनी । दोर्जीले गिलासको छ्याङ् रित्याए । बाहिर निस्के । त्यो रात छार्काको आकाशभरि तारा टिलपिल गरेका थिए । वरपरका अग्ला चुचुराको सेतो हिउँ रातको अँध्यारोमा पनि प्रष्ट चिनिन्थ्यो । कति हजार वर्ष पहिलेदेखि डोल्पाको साल्दाङ्, छार्का, द्यो–तरापमा पुर्खा बसेका होलान् ? गुरु सेनरेव आउनुभन्दा पहिलेदेखि हाम्रा पुर्खा यहाँ बसेका थिए । त्यसैबेलादेखिको प्रकृति पूज्ने चलन अहिलेसम्म जीवित छ । जन्मेदेखि नाचेको पाखा–पखेरा, खोला, पाटन, लेक, याक, चौरी, नाउर, हिमचितुवा, वर्षे फूल, छार्का खोलाको चीसो र आकाशभन्दा नीलो पानी सबैलाई त्यो साँझ एकै पटक तारा हेर्दै सम्झ्यो । जन्मथलो छोडेर, के गरेर ठूलो परिवारको ताराबारा लगाउने दोर्जी अन्योलको भुँवरीभित्र छि¥यो । उसको कन्चेट बल्केको आफैँले थाहा पायो ।
पेमाले भनेको कुरा पुर्खासँग भन्दा पनि सिधै सन्तानको भविष्यसँग जोडिएको थियो ।
त्यो रात दोर्जी निदाउन सकेन । पेमाले भनेको कुरा र आफू जन्मेर, त्यहीँ हुर्केर बलौटे माटोसँग ददारिँदै खेलेको पखेरा र हिउँका चुचुरा, याक, चौरी र भेडाच्याङ्ग्राले घेरेर उसलाई फुत्कनै दिएनन् । मुस्ताङको पूर्वी आकाशमा गेरुपन देखियो । ससाना हिमाली भँगेरा चिरबिर गर्न थाले, हिमाली काग छार्का खोलावारि र पारि गर्न थाले । घामका किरण छार्का उपत्यकामा झर्दा नझर्दै प्रकृति र जीवजन्तु चलबलाउन थाले । सूर्यको किरणसँगै प्रकृतिको रङमा हुने परिवर्तन र जीवजन्तुमा आउने उमङ्गलाई दोर्जीले राम्रोसँग पढेको छ–अक्षर नचिने पनि ।
तीन मुखे फलामको चुलोमा गुइँठा बाल्यो र बिर्को लगाइदियो । पाइपबाट गुइँठाको धुँवा माटोको समथर छानो नाघेर हिमचितुवा लुक्ने पाखातिर उक्ल्यो । पानीका तीन कित्ली चुलोमा लहरै राख्यो र बाहिर निस्क्यो । किन–किन त्यो बिहान पूरै छार्कालाई अँगालो हाल्न मन लाग्यो दोर्जीलाई । उ आफू ४४ वर्षसम्म हिँडेको पखेरा, खर्क, पाटन, भन्ज्याङ तीर्थ र व्यापार गर्न तिब्बत गएको सबै ठाउँ दौडेर पुग्न चाह्यो । कित्लीको पानी नउम्लिँदै दौडेर पुग्ने कामना ग¥यो । पुरानो बोन गुम्बा र कानी चोर्तेन भएको थुम्कोमा चढ्यो । चारैतिर आँखा दौडायो । लम्पसार परेर सेनरेव र बुद्धलाई ढोग ग¥यो ।
तीनवटै कित्लीको पानी भकभक उम्लेको थियो । एउटा कित्लीमा पेमाले चौरीको घिउ, नुन र जडीबुटीको चिया राखेर सुचे बनाइसकेकी थिइन् । केटाकेटीले सुचेमा चम्पा घोलेर खाए । उनीहरूरूले नुन चिया थपिथपि पिए । ‘म ठूलो दाइलाई भेट्न जान्छु’ भन्दै दोर्जी बाहिर निस्क्यो ।
दोर्जीका जेठा दाइ पेम्बा रोकायाले छ्याङ तताएर पिउँदै थिए । दोर्जीलाई पनि एक गिलास छ्याङ दिदै भने ‘के भो ? आँखा रातो छा । अनुहार मलिन छा । रक्सि धेरै खायो कि ? कि झगडा गरिस् पेमासँग ? केहि नभन है पेमालाई । माइती टाढा छा । एक्लै रुन्छा ।’
थोरै छ्याङ सुरुप्प पियो । दुवै अँजुलीले अनुहार सोहो¥यो र अघिल्लो साँझ पेमाले भनेको सबै कुरा पेम्बालाई बेलीबिस्तार लगायो । भाइको कुरा सुनेपछि पेम्बाले पनि आफ्नो दुवै हातले अनुहार र आँखा बेस्सरी मिचे । बाहिर निस्के । भित्र पसे । छ्याङ् थपे, भाइलाई थपिदिँदै भने–‘भेडा खेद्ने मान्छे । शहरमा बोल्ना जान्दैना । मान्छेले हेप्छा । भोटे भन्छा । टिक्ना सक्छ कि सक्दैन तैँले ? झन घर बिगार्छ कि ? छोराछोरी पढाउन सक्यो भने त घर मात्र होइन, गाँउ–ठाँउ उज्यालो हुन्छा । आँट गर्छा भने जा । म के सक्छा ? सहयोग गर्छा ।’
पेमाले भनेझैँ– व्यवहार मिल्ने भयो । दाइभाउजुले सहयोग गर्ने भए । दोर्जीको दाइले भेडा, याक र चौरीको हिसाब गरेर पैसा दिए । उवाबारी पनि दाइले नै कमाउने भए । एक दिन लामाले जोखना हेरे । राम्रो दिन पारेर घरमा नै लामा राखेर पूजा पाठ गरियो । त्यो दिन वल्लो र पल्लो छार्काका सबै छिमेकीले खादा, बियर, छ्याङ, रक्सी, अण्डा लिएर आङ्गी, बख्खु पहिरेर भेट्न आए । आफन्तको बसाईसराईमा बिदाइका लागि पुगेका छिमेकी सबैको अनुहार कालो बादल लागेको दिन जस्तै मलिन देखिन्थ्यो ।
दोर्जीको परिवारले आफ्नो पुर्खाले गर्ने गरेको चलनअनुसार सबै पूजा गरे । याक, चौरी, भेडाच्याङग्रा चराउने लेक, खेत, बारी, उपत्यका, गुम्बा, चोर्तेन जताततै लुङदार फहराए, धुप बाले । प्रकृति, जीवजन्तु, माटो, पशुपंक्षी, हिमचितुवा र नाउर हिँड्ने पखेरा र तिनीहरूरू लुक्ने पहराका काँप सबैलाई नमन गरे । सबैका गहभरि टिलपिल आँशु पारेर आफ्ना आँशु पुछदै दोर्जीको परिवार छार्काबाट याक खर्क हुँदै त्यहाँको सबैभन्दा अग्लो धुरी जुनबेन ला नाघेर साङ्ता पुगे । पेमाको माइतीमा एक साता बिताएर जोमसोम, तातोपानी, घोडेपानी, बिरेठाँटी पैदल यात्रा गरी पोखरा पुगे । त्यहाँ भेडाच्याङग्रा बिक्री गर्न आउँदा बनाइएका साथीसँग एक महिना बिताए र काठमाडौँको स्वयम्भूनजिक दुई कोठा भाडामा लिएर बस्न थाले ।
पढ्न–लेख्न नजाने पनि दोर्जीभन्दा पेमा व्यवहारिक सीप भएकी, प्रष्ट बोल्ने, जुझारु र देश दर्शन गरेकी हुनाले पढाइको महŒव राम्ररी बुझेकी थिइन् । साङ्ताबाट ऊनका टोपी, पञ्जा, मोजा, दामोदर कुण्डको कुश र शालीग्राम लिएर आफ्ना बाबु, दाइसँग भारतको आसामसम्म पुगेकी थिइन्–जाडो छल्दै व्यापारका लागि । कालीगण्डकी र ब्रह्मपुत्रको पानीले उनलाई संस्कार र संस्कृति सिकाएको थियो । उनको एउटै धोको थियो–सन्तानलाई अक्षर चिनाउने ।
कठोर आर्थिक अवस्थाका बेला पेमाले भोकभोकै रात बिताएको दोर्जी र तीन सन्तानले चालै पाएनन् । उनको एक मात्र लक्ष्य थियो दुई छोरा र छोरीलाई भेदभाव नगरी शिक्षा दिने । तिनीहरूले शिर ठाडो गरेर हिँडेको र पेटभर खाएको मन लाएर हेर्ने । स्वयम्भूमा कोठा लिएर १४ वर्षको छोरा दावालाई कक्षा चार, १२ वर्षकी याङ्जीलाई कक्षा तीन र नौ वर्षको कान्छो छोरा बुद्धलाई कक्षा दुईमा वनस्थलीमा भर्ना गरे । शहरका बालबालिकाले १४–१५ वर्षको उमेरमा दस कक्षाको परीक्षा दिन्छन् । डोल्पाको हिमाली क्षेत्रमा हुर्केका पेमाका सन्तान खाइलाग्दा, अग्ला र तिनीहरूरूका गाला मार्फाका स्याउजस्तै राता थिए ।
त्यसैले कक्षामा अरुभन्दा तिनीहरूरू उमेर बढि र शारीरिक बनोटमा पनि अग्ला मोटा देखिन्थे । केटाकेटीको स्तर राम्रो बनाउन पेमाले घरमा अङ्ग्रेजी, हिसाब, नेपाली र विज्ञान विषयको छुट्टै ट्युसन राखिदिइन् । पेमाले घरको काम र बच्चाहरू हेर्ने गरिन् । उनले फुर्सदको क्षण ऊनी धागो डल्लो पार्ने गर्थिन् जसबाट प्रतिकिलो रुपैयाँ एक कमाउँथिन् । दोर्जीले भने जडीबुटीको व्यापार गर्न थाले जुन उनले पहिले डोल्पामा हिउँ पर्न थालेपछि औल झरेर गर्ने गर्थे ।
डोल्पाबाट काठमाडौँ छिरेपछिको एक दशक दोर्जी दम्पत्तिको लागि डोल्पाको जीवनभन्दा कष्टकर भयो । तीन जनाको पढाइ खर्च धान्न महाप्रलय नै भयो । धेरै पटक डोल्पा नै फर्कने कुरा भयो । दोर्जीले पेमालाई ‘तैँले गर्दा डोल्पा पनि छोडनुप¥यो । न घर न घाट को हुने भइयो ।’ भनिरहन्थे । तर पेमा भने दुःखसँग हारेकी थिइनन् । पेमाको पीडा, कष्ट, भोक, रोग, अभाव सहन सक्ने क्षमतासँग बरु दोर्जी नै धेरै पटक हारेका थिए ।
छार्का खोलाझैँ समय बगिरह्यो । आफूले कल्पना गरेको कुरा यथार्थमा परिणत भएकाले पेमा खुसी थिइन् । सुरुका दिनमा जस्तो पैसाको दुःख उनलाई भएन । तीनै जना छोराछोरीले एसएलसी पास गरे । त्यसपछि पेमाले बौद्ध र स्वयम्भू गएर बत्ती बालिन् । आमाबाबुले के कति दुःख गरेर उनीहरूलाई शिक्षा दिए भन्ने कुरा केटाकेटीले त्यति चाल पाएनन् ।
केटाकेटीको स्कुलको अध्ययन सकियो । सधैझैँ त्यस वर्ष पनि माघ महिनामा नेपालभर अरब सागरबाट आएको चिसो हावासँगै पानी प¥यो । पामीर, हिन्दूकुश, काराकोरम हुँदै आएको चिसो हावाले हुम्ला, दार्चुला, मुगु, डोल्पा हुँदै कञ्चनजङ्घासम्म हिउँ प¥यो । पश्चिममा भन्दा पूर्वमा कम हिउँ प¥यो वर्षामा मनसुन पूर्वमा भन्दा पश्चिममा कम भएझैँ । प्रकृतिको त्यो तालिका । त्यस वर्ष डोल्पामा धेरै भेडा, याक र चौरी मरे । गुइँठा र दाउरा सकिएपछि वृद्ध आमा, बा र ससाना बालबालिकाले हिउँ थेग्न सकेनन् । पेमा र दोर्जीले डोल्पामा पुसमाघमा परेको हिउँको खबर धेरै ढिलो गरी पाएका थिए । आज जस्तो त्यसबेला फोन थिएन ।
मौसममा सुधार भयो । ताजा हिउँले उपल्लो क्षेत्रका पहाड र हिमचुचुरा दुलहीझैँ सिँगारिए । कलिलो घाममा चराचुरुङ्गी, घरपालुवा र जङ्गली जनावर पाखापखेरामा नयाँ उमङ्ग लिएर रमाउन थाले । यता दोर्जीको जीवनमा पनि बादल फाटेर नीलो आकाश देखिएझैँ हुन थाल्यो । दोर्जीको व्यापार बढ्यो । केटाकेटीले कलेज पढ्न थाले । झण्डै पाँच वर्ष उनले यार्सागुम्बा, चिराइतो, पाँचऔले र अन्य जडीबुटीको व्यापार गरे । त्यसले पेमाको सपना साकार पार्न मद्दत ग¥यो । उनीहरूलाई काठमाडौँ बस्न र छोराछोरीलाई विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि पठाउन बल दियो । त्यसैबेला उनले सानो भ¥याङ स्वयम्भूनजिक एक रोपनी जग्गा लिए । त्यहीँ घर बनाए । त्यसपछि उनले साँखुभन्दा माथि रहेको जहरसिँहपौवामा दश रोपनी पाखो बारी किने ।
मानिसको जीवन कष्ट, पीडा, झन्झटबिना गुजँ्रदैन । पेमा र दोर्जीमा छोराछोरीको कलेजको पढाइपछि परिवारको व्यवस्थापन गर्ने धारणामा परिवर्तन आउन थाले । डोल्पामा हुँदा छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोच नै नभएका दोर्जीलाई पेमाले सम्झाएर काठमाडौँ ल्याएकी थिइन् । काठमाडौँमा पढेपछि नेपालमा नै आफ्नो पारिवारिक चलनबमोजिम घरजम गरेर सानोतिनो काम गरेर आफ्नो वरपर नै केटाकेटी बसून् भन्ने पेमा चाहन्थिन् । तर, दोर्जी भने त्यत्तिमा सन्तुष्ट भएनन् । उनले काठमाडौँका अरू मानिसका छोराछोरी अमेरिका, बेलायत, जापान, अष्ट्रेलिया गएको देखे । नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा जागिरको कुनै सम्भावना नभएकाले बी.ए., बी.कम गरेका तीनै जना छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने निधो गरे । त्यसबेला उनले साल्दाङ उपत्यकाभन्दा ठूलो छाती बनाए ।
पेमाले धेरै पटक ‘बाहिर पठाउने नै हो भने बिहे गरेर पठाऊँ । उमेर पुगेका छोराछोरीलाई त्यत्तिकै पठाउन हँुदैन । हामी बिमारी हुँदा औषधी खान दिने एक सन्तान साथी साथमा नै राखौँ ।’ भनेको कुरा दोर्जीले मरी गए सुनेनन् ।
‘हामी बुढो हुँदा हेर्छन भनेर छोराछोरी विदेश पढ्न जान नदिने ? त्यस्तो स्थार्थी हुन हँुदैन । जे होला त्यही टर्ला । तिनीहरूको इच्छा छ भने जान दे । पीर नगर’ दोर्जीले भन्थे । नभन्दै तीनै जना अमेरिका नै छिरे ।
छरछिमेकीले खुसी व्यक्त गर्दै कोसेली लिएर पेमालाई भेट्न आए तापनि छोराछोरी विदेश गएकोमा उनी खुसी थिइनन् । ‘अब एक्लो हुने भइयो । यी फर्कँदैनन् । हामीले भनेको पनि मान्दैनन् । बिहे गरेर पठाइदिएको भए कमसेकम नाता टुट्दैनथ्यो’ भन्ने कुराले उनी धेरै पिरलिएकी थिइन् । दोर्जीले पेमाको त्यो मनलाई पढ्न सकेनन् । छोराछोरीलाई जति सक्छ पढाउनुपर्छ भन्ने कुराको भूत उनको दिमागमा चढेको थियो । उनले आफ्नो बुढ्यौलीलाई पटक्कै सोचेनन् । उल्टै पेमालाई‘तँलाई के थाहा ?’ भन्न थाले ।
कहिल्यै चर्को आवाज ननिकाल्ने ती दुई दम्पत्तिमा ठाकठुक पर्न थाल्यो । त्यसबेला अमेरिका पढ्न पठाउने कुराले सामाजिक मान्यता पाएको थियो । त्यसमा पनि डोल्पाबाट काठमाडौँ झरेको गाउँलेका तीनै जना छोराछोरी उच्च शिक्षा लिन अमेरिका जाने कुरा चानचुने थिएन । मानव जातिमा रिस, आरिस गर्ने चलन भए पनि पेमाको भने कसैले आरिस गरेनन् । किनभने स्वयम्भूनजिक उनका आफन्त कोही थिएनन् ।
दोर्जीले ‘तैँले पीर नगर, हाम्रा छोराछोरी अरूका जस्ता छैनन् । हामी डोल्पाको त्यस्तो विकट ठाउँबाट आएको हो । हामीले डोल्पाको माटो र संस्कृतिलाई भुल्न हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्सँदैनन् ।’ भन्थे ।
पेमाले संसारलाई आमा भएर बुझेकी थिइन् । दोर्जीले व्यवहारिक रूपमा भोलि एक्लै हुँदा के होला भन्ने पटक्कै सोच्दैनथे । बिहान बेलुका देशको माटो निधारमा दल्ने दोर्जी देशमा भएको अशान्ति र अराजकताले वाक्क भएका थिए । राजनैतिक परिवर्तन पछि नेपालले पनि चीनले झैँ आर्थिक फड्को मार्छ । दश वर्षमा त डोल्पातिर पनि कसो प्रजातन्त्र न पुग्ला र ? भन्ने दोर्जी देशको लामो र विकराल अराजक सङ्क्रमणले वाक्कदिक्क बनेका थिए । ‘छोराछोरीले उच्च शिक्षा लिएर राम्रो जीवन बिताए भने सबै ठीक भैहाल्छ । बुढेसकालका लागि भनेर कस्का छोराछोरी आमाबासँग बसेका छन् र ? आफूसँगै भएका सन्तानले पनि बृद्धाबस्थामा आमा–बालाई पशुपतिको बृद्धाश्रममा छोडेको देखिनस् र ? हामीले डोल्पा छोडेर यहाँ आएको होइन र ?’ दोर्जीले पेमालाई सम्झाउँदै प्रतिप्रश्न गर्थे ।
कस्को कुरा सही हो ? त्यो त समयले नै बताउँछ । सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र जीवन ? सायद जीवनमा पनि वेदका जस्तै अध्याय हुन्छन् क्यार ? जुन दिन तीनै सन्तान पढ्न बिदेसिए त्यसको केही समयसम्म दोर्जी खुसी देखिन्थे । डोल्पाको छार्कामा जन्मेर हुर्केका सन्तानलाई चौरीको पुच्छर समात्न छुटाएर नेपाल पु¥याए । त्यसमा मात्र सन्तोष मानेनन् । त्यहाँबाट अमेरिका पु¥याए । त्यहाँ लुकेर गएका होइनन् कलेजले छात्रवृत्ति दिएर गएका हुन् । के त्यो दोर्जीको लागि ठूलो कुरो थिएन र ? अवश्य थियो । त्यसमा उनी सफल भएका थिए । छार्का गुम्बाका लामाले समेत उनको घरमा नै गएर विशेष पाठ गरिदिएका थिए । त्यो दिनको त्यो क्षण दोर्जीले आफू पूर्ण सफल भएको ठान्थे । साथीसँगीसँग कुरा पनि गर्थे ।
तर, अहँ पेमाको हृदय भने हाँसेको थिएन । उनको पहिलो पुस्ता छार्काबाट काठमाडौँमा बसोस् भन्ने उनी चाहन्थिन् । पहिले पेमाको कुरालाई सर्लक्कै मान्ने दोर्जीले पछिल्लो चरणमा उनका कुरा सुनेनन् । ‘मैले छोराछोरीको कलेज पढ्नासाथ बिहे गरिदे भनेको मानेनस् । लोग्नेमान्छे छिटो भत्कन्छ । तँ भत्कन्छस् । तँलाई रुन पर्ला । म आमा हो बुझिस् । आमा भनेको साङ्ताको जर्जरे भूमि हो जहाँ उवा फल्छ । त्यो सम्झी । म त के भो र ? चोट, दर्द र आँशु त मेरा प्यारा साथी हुन् । तिनलाई लिएर म छार्काको हिउँमा खेल्न सक्छु । तर तँ फुट्नेछस् । त्यसबेला मलाई केही नभनेस् । ’ पेमाले बारम्बार भन्थिन् । नेपाल नै बसून् नभए पनि बिहे गरेर मात्र विदेश पठाउने उनको जोडलाई दोर्जीले वास्तै गरेन । त्यसपछि पेमाको मन नराम्ररी भाँचियो ।
‘बिहे गरेपछि सङ्कट आउँछ । पारिवारिक झमेलाले गर्दा केटाकेटीले राम्रो पढ्न सक्दैना । तैँले यो कुरा बुझ्दैना । पढन दे । पढि सकेपछि बिहे गरिदिउला नि ! हाम्रो छोराछोरी धेरै ज्ञानी छन् । तेरो र मेरो भावना, दुःख, मर्म, धर्म र संस्कार बुझेका छन् । चिसो हिउँमा खेलेका नानी हुन् औलका होइनन् । विपरित हुँदैन । मेरो जिम्मा भो । तँ दुःख नमान् । फराकिलो सोँच राख्नुपर्छ । जसरी चौरी र याक लेखमा चर्दैचर्दै माथिमाथि पुग्छन् त्यसैगरी तिनलाई पनि पढेर माथि पुग्न दे । ’ दोर्जीले सम्झाउँदै भन्थे।
पछिल्ला दिनमा दुई दम्पत्तिको धारणामा फरक देखिन थाल्यो । ऋतुमा परिवर्तन भयो । फेरि हिउँद लाग्न थाल्यो । नीलो छार्का खोला सानी भेरी भएर बग्न हतारिएर हुत्तिदै झर्दै थियो । दाउरा, गुइँठा, घाँस, अन्नपात हिउँदलाई पुग्नेगरी सबैले राखे । कुन–कुन याक, चौरी र भेडा कहिलेदेखि बेँसी झार्ने हो छलफल हुन थाल्यो । यस पटक लुम्बिनि र तीलौराकोट जाने कि नजाने टुङगो भएन । छार्काका गाउँले हिउँदको व्यवस्थापन गर्दै थिए । हिउँदमा हिउँ परे पछि कतै जान पनि सकिँदैन । चिसोले गाउँमा बस्न पनि सकिँदैन त्यसैले पालो गरी गाउँ हेर्ने मानिस राखेर सबै तल झर्छन् । त्यसैबेला हिमालबाट बोकेर लगेको जिम्मु, बोदो, यार्सागुम्बा, शिलाजीतको व्यापार गर्छन्, बोन र बौद्ध गुम्बा, पशुपति, स्वयम्भू, कागबेनी, मुक्तिनाथको दर्शन गर्छन् र फर्कँदा घरलाई चाहिने सामान लिएर उकालो लाग्छन् । हरेक वर्ष त्यस्तै हुन्छ । त्यो वर्ष पनि हिउँ अचाक्ली नै प¥यो । उवा, आलु र जौ फल्ने भो भनेर किसान खुसी देखिन्थे।
यता पेमाको अनुहार बादलिएको भने धेरै भएको थियो ।
तीनै जना सन्तान उच्च शिक्षा हासिल गरेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी लिएर काम गर्न थालेका थिए –अमेरिकामा । पहिलो पुस्ताको नेपालीको रूपमा नै किन नहोस्, उनीहरूको राम्रो आर्जन भएकाले स्तरीय थियो– अमेरीका बसाइँ ।
तीनै जना छोराछोरीले पढाइ सकेर काम गर्न सुरु गरेपछि दोर्जीले जडीबुटीको व्यापार छोडिदिए । व्यापारबाट बचेको केहि रकम उनले पेमा र आफ्नो बैँक खातामा जम्मा गरेका थिए, त्यसको ब्याजले दुई जनालाई मनग्य पुग्थ्यो ।
छोराछोरी अमेरिका छिरेपछि पेमाको हृदय कट्कट् खान थाल्यो । चन्द्रमामा घेरा भएझैँ आफ्नो जीवनमा त्यस्तै कालो घेरा देख्न थालिन् । मानिस निकै स्वार्थी हुन्छ । ऊ सन्तोष मानेर बस्दैन । अनि दुःख पाउँछ । दोर्जीले दुःख पाउने भयो भन्ने कुरा पेमाले झलझली देखिन् । त्यस्तोमा उनले उनी खेलेको साङ्ता र कालीगण्डकीको विशाल बगरलार्इं सम्झन थालिन् ।
एउटा सुखी र सानो परिवारमा नयाँ चाहनापछि असन्तोष देखापर्न थाल्यो । छब्बीस वर्षको दावा अमेरिका उड्दा दोर्जी जति खुसी थिए त्यत्तिकै दुःखी थिइन् पेमा । दोर्जीले भविष्यमा हुने कुरा केहि देखेका थिएनन्, तर पेमाले देखेकी थिइन् । छिमेकीका छोराछोरी पाताल पुगेपछि भासिएका कथा उनले स्वयम्भू र सानो भ¥याङमा धेरै सुनेकी थिइन् । उनले दावा पढ्न भनेर गएको भए तापनि फर्कँदैन–भन्नेमा ढुक्क थिइन् । त्यसैले उनले मुटु निचोरेकी थिइन् ।
आमाको सोचाइ सही साबित भयो । अरू दिन जस्तै लेन्डलाइनमा फोन आयो । पेमाले उठाइन । दोर्जी घरमा थिएनन् । ठूलो छोरा दावाको नेपालमा भएको साथीको फोन थियो । ‘अन्टी, दावाले त उता एक अमेरिकन केटीसँग बिहे गरे छ नि ! फेसबुकमा फोटो राखेको छ । तपार्इंलाई थाह छ कि छैन ?’
‘एक अमेरिकन केटीसँग बिहे गरे छ नि !’ भन्नेसम्म उनले सुनिन् । त्यसपछि पेमा बेहोस भइन् ।
त्यो क्रम रोकिएन । बेहोस हुने क्रम बढ्यो । छोरीले एक जना अमेरिकन चाईनिज र कान्छोले एक जना अमेरिकन नेपालीसँग बिहे गरेको खबर पेमा र दोर्जीले पालैसँग थाहा पाए । बाबु र आमाको मन कति पटक भाँचियो, कति पटक आरनमा पोलियो, कति पटक कालीको भेलमा हेलियो थाहै भएन । पाँच वर्षसम्म पेमा आँशुको आहालमा डुबिन् ।
दोर्जीले सबै काम छोडे । उनी पनि बाहिर निस्केनन् । उनी बाबु भएको घमण्ड चुरचुर भयो । पेमा दोर्जीसँग झगडा गर्दै बरबर्ती आँशु झार्दै ‘मैले बिहे गरेर पठाउ भनेको मानिनस् अब एक्लै रुदै मर्’ भन्थिन् ।
साँचो हो । दोर्जी एक्लै रुन्थे । झस्कन्थे । कहिलेकाँही आफैलाई चिथोर्थे । ‘हाम्रो मात्र हो र ? सबैको त्यस्तै छ । अरुको कथा पढेर बाँच्न जान्नपर्छ । छोराछोरी भोकै मर्दैनन्, शिक्षित छन् । बेरोजगार छैनन्, कुलतमा फसेका छैनन् । त्यो भन्दा खुसीको कुरा आमा–बाबुलाई अरु केहि हुन्छ र श्र? उनीहरूको जीवनसाथी उनीहरूले नै छाने के भो त ? मैले पेमालाई छानेको होईन र ? फरक के भने मैले आमा–बाबु, दाइ–भाउजुको स्वीकृति लिएँ । छोराछोरीले लिएनन् ।’ भन्दै आफँैलाई सम्हाल्थे ।
पेमाले दस पर्व पहिल्यै देखेको दृश्य आज सत्य भयो जुन दोर्जीले सोचेकै थिएनन् । त्यसैले बढी टुक्रिए उनी । पेमाले भनेको मानेको भए आज उनीहरू जिउँदै मर्ने थिएनन् । हुन त नेपाली समाजमा परिवर्तन हँुदै थियो । दोर्जी र पेमाको घरमा घटेका घटना त सामान्य थिए । तर अचम्म के भने तीनै सन्तानले बिहे गर्दा आफ्ना आमाबाबुलाई एक पटक पनि सम्झेनन् । किन होला ? आफ्ना छोराछोरीले आमाबाबुलाई खबरै नगरीकन कसरी बिहे गर्न सके होलान् ? के बिहे गर्दा उनीहरूको आँखाअगाडि आमाबाबु देखिएनन् होला ? कसरी आमाबाबुलाई खबर नै नगरी बिहे गर्ने आँट गरे होलान् ? त्यो प्रश्न अनुत्तरित रहि नै रह्यो ।
उनीहरूको मन भाँचियो र टुक्राटुक्रा भयो । त्यस पछि स्वर्गजस्तो त्यो घर, घर नै रहेन । जब घर बिग्रन थाल्छ, सबै कुरा पानीझैँ ओरालो लाग्छ । त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो । दोर्जी र पेमाको घरमा झगडा नभएको दिन नै हुँदैनथ्यो । दुई–तीन दिनसम्म खाना पाक्दैनथ्यो । चिया र तातो पानी खाएर दिन बित्थे । तर झगडा साम्य भएन । पेमाले ‘मैले भनेको मानेर कलेज सकेपछि बिहे गरिदिएको भए तँलाई रुन पथ्र्यो ? के पाइस् तैँले छोराछोरीलाई विदेशमा पढाएर ? तँ बाबु होस् भन्ने कुनै हेक्का राखे तेरा सन्तानले ? अब रोएर बस् । मैले त भनेकै थिए नि तैँले मानिनस् ।’ पेमाका शब्दवाणले दोर्जी झन् प्रताडित बन्थ्यो । कहिलेकाहीँ जुरुक्क उठेर तीन–चार दिनसम्म हराउँथ्यो र रुझेको बिरालोजस्तो भएर फर्कन्थ्यो ।
झगडा रोकिएन । सन्तानसँगको सम्पर्क विच्छेद भयो । अमेरिकाबाट तीनै छोराछोरीले हरेक दिन बिहान–बेलुका फोन गर्थे तर न दोर्जीले फोन उठाए न त पेमाले नै । सन्तानप्रतिको मायाले पेमा भक्कानिँदै रुन्थिन् तर हृदयमा घाउ लागेकाले फोन भने कहिल्यै उठाइनन् । यतिसम्म भयो कि आमा खुवाउने औँशीमा छोराछोरीले पठाएको उपहार पनि दोर्जीले बुझ्न मानेनन् । सबै कुरा नकारात्मक धारतिर बग्न थाल्यो । माया र प्रेम एक्लाएक्लै आँशुका धारामा परिणत भए । पेमाको आँखाका आँशु नै सुके । सन्तानले आमाबाबुलाई सम्झाउन नसक्नु र आमाबाबुले सन्तानले गरेको गल्तीलाई माफ गर्न नसक्नु, समयलाई बझ्न नसक्दा वृद्धावस्थामा ती दुई दम्पत्तिको जीवन दुःखको पोखरीमा चुर्लुम्म डुब्यो ।
पेमा र दोर्जीबिच यतिसम्म झगडा हुन थाल्यो कि ती दुई सँगै बस्ने अवस्था नै रहेन । ‘तैँले गर्दा हाम्रा सन्तान टाढा भए’ पेमाले दिनहुँ रुदै आक्रोश पोख्थिन् । ‘पढ्न पठाउनु मेरो गल्ती हो र ?’ दोर्जीले जवाफ दिन्थे र त्यसैमा झगडाले उग्र रूप लिन्थ्यो । पेमाको माया रक्तकालीको जस्तै उग्रतामा रूपान्तरण भएको थियो । चुपचाप बस्न पनि दोर्जीलाई कठिन भयो ।
अप्रिय घटना नघटोस् भनेर एक दिन सत्तरी वर्षका दोर्जी र साठी वर्षकी पेमा दुवै जनाले चिया पिउँदै सल्लाह गरेर चालिस वर्षको प्रेमको लामो यात्रालाई भाँच्ने निर्णय गरे । स्वयम्भूमा रहेको घरमा पेमालाई छोडेर दोर्जी जहरसिँहपौवातिर लागे । उनीहरू बिचको साङतामा झाङ्गिएको गहिरो प्रेममा पूर्णविराम लाग्यो । पेमाको छातीमा लागेको घाउ दोर्जीको प्रेमले निको पार्न सकेन । दुवैले एकअर्काको पीडालाई बुझे पनि पीडा प्रेममा रूपान्तरित भएर शेफोक्सुण्डो तालजस्तै शान्त हुनुपर्नेमा साउनमा हुने कालीगण्डकीको जस्तै आक्रोशको भेल भएर उल्र्यो ।
दोर्जीले जहरसिँहपौवामा काठको सानो घर बनाए । वरपरको जग्गामा फलपूmल र खेतिपातीले ढकमक्क पारे । दिनको तीन–चार पटक उनी भक्कानो छोडेर बारीको कुनामा एक्लै रुन्थे । त्यसपछि उनको छाती हलुका भएको महसुस गर्थे र बगैँचामा काम गर्थे । त्यहीँ बस्दा सबैसँग उनको राम्रो सम्बन्ध भएको थियो । सबैले उनलाई ‘रोका बा’ भन्दै साह्रै माया गर्थे ।
उता पेमा पति, छोरा, बुहारी, नाति, नातिनीको बिच रमाएर बस्ने बेला एकान्तबासमा थिइन । बुढेसकालमा साथीसँगीको आवश्यकता पर्ने बेला ती दुई भने एक्लाएक्लै बसे । समयसँग सम्झौता गर्न नमान्दा सुन्दर परिवार कुरूप बन्यो । दिनहँु हुने झगडाले आक्रान्त हुनुभन्दा छुट्टै बस्दा ती दुई सुखीजस्ता देखिन्थे । हृदयभित्र जलेको पीडा त जसको हृदय जलेको छ उसले बाहेक अरुले कहाँ देख्न सक्छ र ?
‘जे भए पनि पेमाले एक्लै छोड्न नहुने ’ उनीहरूको कथा थाहा पाएका नजिकका छिमेकीले स्वयम्भूको परिक्रमा गर्दा कुरा गर्थे । ‘पेमालाई दुःख नदिनु है’ भन्ने दाजुको वचन दोर्जीले पालना गरेन ‘मर्नेबेला मुखमा पानी हाल्ने कोहि भएन । म भए त थपक्क छोराछोरीकोमा गएर बस्थेँ । घमण्डको फल खाएपछि थाह पाउँछन् ती दुवैले’ छार्कातिरबाट तीर्थ गर्न आएका छिमेकीबिच कुरा हुन्थ्यो ।
जीवनले कहाँ पुगेर कुन मोड लिन्छ थाहा नहुँदो रहेछ र त्यहीँ नै साँचो जीवन रहेछ । एक वर्ष बुद्ध पुर्णिमाको दिन बौद्धनाथ स्तूपाको परिक्रमा गरेर पेमाले १३ वटा बत्ती बालेको दोर्जीले देख्यो । उनले बत्ती बालिसकेपछि फर्कँदा दोर्जीलाई देखिन् । समय घर्कन कति बेर र ! ती दम्पत्तिबीच भेट नभएको बार वर्ष भएछ । दुवैले एकअर्कालाई गहिरोसँग हेराहेर गरे । आँशुका बलिन्धारा झार्दै उनी आफ्नो बाटो लागिन् । दोर्जीको छाती भारी भयो । साङतामा गाँसेको प्रेमको गाँठो नेपाल छिरेर यसरी टुट्ला भन्ने कसलाई थाहा थियो र ? समयसँग हिँड्न खोज्दा अनि समयलाई चिनेर समयसँगै सम्झौता गरेर छार्का खोलाझँै बग्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्दा त्यो सानो सुखी परिवार क्षतविक्षत भएको थियो ।
दोर्जीको मन साँच्चिकै डामिएको थियो । उनले संसारलाई राम्रैसँग बुझेको ठान्थे । उमेर घर्कँदै गए पनि उनले आफ्नो अडान छोडेनन् । सन्तानप्रतिको उत्कट माया भए तापनि सन्तानले आमा र बाबुको मर्ममा प्रहार गरेकाले स्नेहलाई मनबाट आँशुमा पोखिदिए । छियाछिया भएको ह्दयलाई सिउने प्रयासनै गरेनन् ।
चौरासी वर्ष पुगेको दिन बौद्ध र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको किरातेश्वर महादेवको मन्दिरमा गएर बत्ती बाले । त्यही दिन त्यतैबाट उनी तिलगँगा आँखा अस्पतालमा पुगेर डा. सन्तुक रुईतलाई भेटेर आँखा जाँच गरे । उनकै सामु मृत्युपछि आँखा दान गर्ने सम्झौता गरे । त्यसपछि उनी सरासर महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पताल पुगे । निर्देशकलाई भेटे, आफ्नो र परिवारको विवरण दिए र मृत्युपछिको शरीर दान गर्ने कागजमा सहीछाप गरे र जहरसिँहपौवामा फर्के ।
त्यस दिन उनी निकै खुसी देखिन्थे । शरीर हलुका र जीवन पूर्ण भएको उनले महसुस गरेका थिए । जहरसिँहपौवाको जमिनको लालपुर्जा र बैँकका चेकबुक दराजमा एकै ठाउँमा राखे । बुद्ध पूर्णिमाको दिन पेमाले बालेका तेह्र बत्ती क–कसका होलान् ? उनले गन्न थाले । आफू दुई र छोरा–छोरी, बुहारी र ज्वाइँ गर्दा आठ पु¥याए । पाँच थप सन्तान उनको वंशमा थपिनुकासाथै पेमा छोराछोरीसँग सम्पर्कमा रहेको अनुमान गरे । ‘आमा न हो, छोरा–छोरीसँग फोनमा पनि कुरा नगरे कसरी बाँचोस् त! आफैलाई आश्वस्त पारे । सोफाबाट जुरुक्क उठे । दराजको ऐनामा आफूलाई हेरे । मुसुुक्क एक पटक हाँसे । अनि बलिन्धारा झारे र थचक्क सोफामा बसे ।
त्यस दिन रातको दुई बजे उनको मुटु नराम्रोसँग दुख्यो । उनले पेमालाई फोन गरे । अमेरिका भएका तीनै छोराछोरीलाई एक–एक पटक फोन गरे । संयोगको कुरा त्यस दिन कसैको फोन उठेन । त्यसपछि आँखा अस्पताल र महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालमा फोन गरेर उनको मुटु विछट्टै दुखेकाले एम्बुलेन्स पठाइदिन आग्रह गरे । त्यसपछि दोर्जी त्यही सोफामा नै अन्तिम मुस्कान छोडेर सधैँको लागि आराम गरे ।
त्यो बिहान हुईहुई साइरन बजेको सुने पछि गाउँका छिमेकी भेला भइसकेका थिए । सबैका आँखाबाट आँशु झरेका थिए । तिलगँगाको समूहले आँखा झिकेर लगे । महाराजगञ्जको टोलीले छातीको देब्रेभागबाट मुटुको एक अंश झिकेर आईसको बट्टामा राखे । दोर्जीले उनको परिवारले लाश माग्न आएमा दाहसंस्कारको लागि त्यो मुटु दिनु भनेर सम्झौता गरेका थिए । दोर्जीले संसार छोडेको गरेको तेस्रो दिन उनको परिवारका बारजना सदस्य महाराजगञ्ज पुगे । दान गरिएको लाशमाथि सबैले आँशुका पुष्पगुच्छा चढाए । आइसको बट्टामा राखेको मुटुको एक टुक्रा लिएर आर्यघाट हुदै स्वयम्भू अनि डोल्पाको छार्कातिर गए । कपन, काठमाडौँ